အဖြစ်ကမနှစ်ကနဲ့မတူ အိမ်ခြံမြေဝယ်နည်းအဆန်းပါနော် - Property Knowledge in Myanmar | iMyanmarHouse.com
27 Nov 2019 1:52 pm တွင် တင်ခဲ့သည်
777 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး
ညပိုင်းထမင်းစားပြီးလို့အနားယူချိန်မှာ ဖုန်းခေါ်သံကြားလို့ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ နံပါတ်အသစ်နဲ့မို့ “ ဟယ်လို…… မင်္ဂလာပါ ” လို့ နှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုနှုတ်ဆက်လိုက်တာနဲ့ ဟုတ်ကဲ့ …
“မင်္ဂလာပါဆရာ ဦးကောင်းဖေ ဟုတ်ပါသလားရှင် ”
“ ဟုတ်ပါတယ်သမီး ”
“ ကျွန်မက ‘ ချယ်ရီသင်းပါ ’ Property အိမ်ခြံမြေကုမ္ပဏီက ‘ ကိုအောင် ’ ရဲ့ အသိမိတ်ဆွေပါ။ အော် … ဟုတ်လား ဘာအကူအညီပေးရမလဲပြောပါဦး ”
“ ကျွန်မတို့က မြောက်ဒဂုံ ၄၀ ရပ်ကွက်မှာ မြေနဲ့အိမ်ဝယ်ချင်လို့ပါ။ အဲဒါစရန်ပေးစာချုပ်ပေးဖို့ ရှေ့နေကြီးကိုခေါ်ချင်လို့ပါ မနက်ဖြန်ညနေ (၃) နာရီမှာစာချုပ်မှာပါ ”
“ ရပါတယ် …လာပေးနိုင်ပါတယ် ”
“ ဒါပေမဲ့ စာချုပ်က ရိုးရိုးစာချုပ်နဲ့မတူပါဘူး၊ ဘဏ်က Home Lone ချေးငွေနဲ့ဝယ်ယူမှာဖြစ်လို့လုံလောက်တဲ့ချေးငွေအရင်လျှောက်ယူရပါ့မယ်။ဘဏ်ကချေးငွေရရှိပြီးမှ ကျန်ငွေချေးမှာပါ ”
“ ဟင်…. ဟုတ်လား ” မောင်ကောင်းဖေစဉ်းစားကြည့်တာကတော့ နည်းနည်းတော့ထူးဆန်နေသလိုပါဘဲ ” ဒါကြောင့် “ ချယ်ရီတို့က စရန်ငွေအရင်ချမယ် ကန့်ကွက်ရန်ရှိမရှိသတင်းစာကြော်ငြာပြီးစောင့်မယ် ။ကန့်ကွက်သူမရှိရင် နောက်ဆုံးကျန်ငွေချေပြီး မြေနဲ့အိမ်လက်ရောက်ယူမှာမဟုတ်လား ”
“ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးရှင့် ကျွန်မတို့က စရန်ငွေ သိန်း (၂၀၀) ပေးမယ်။ ရောင်းသူက မြို့တော်စည်ပင်မှာ အရောင်းမြေပုံကူးပေးရမယ်။ အရောင်းမြေပုံရတာနဲ့ ရောင်းသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ မြေနဲ့အိမ်ကို ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တစ်ခုမှာ ပေါင်နှံမယ်ဒါကိုရောင်းသူကလည်း သဘောတူရမယ် ”
“ ပေါင်နှံတဲ့အခါ ရောင်းသူအမည်ပေါက် မြေဂရန်ကိုဘဏ်မှာ အပ်နှံထားရမယ်၊ ရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူတို့ချုပ်ဆိုမှာ နှစ်ဦးသဘောတူမြေနဲ့အိမ်အရောင်းအဝယ်စာချုပ်ကိုလည်း ဘဏ်မှာအပ်နှံထားရမယ်ပေါ့ ၊ ဒါ့အပြင် မြေဂရန်အမည်ပေါက်ရောင်းသူက ဘဏ်ကို အထူးကိုယ်စာလှယ်လွှဲစာလွှဲပေးရမယ် ။ ဘဏ်က ကျွန်မတို့ပေးချေးရမယ့် ငွေအားလုံးကို ထုတ်ပေးတာနဲ့ရောင်းသူကိုပေးဖို့ ကျန်တဲ့ငွေအားလုံးကိုပေးချေလိုက်မယ်လေ” ဘဏ်ကထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ ငွေအရင်းတွေနဲ့ လစဉ်အတိုးငွေတွေကိုတော့ ကျွန်မတို့ကလစဉ်ရတဲ့ ဝင်ငွေထဲက အရစ်ကျပေးဆပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ်ကချေးယူထားတဲ့အကြွေးငွေအားလုံးကျေတာနဲ့ မြေနဲ့အိမ်ဖိုးကို အခွန်ဦးစီးဌာနမှာ အခွန်ဆောင်မယ် ၊ အခွန်ဆောင်ပြီးရင် မှတ်ပုံတင်အရောင်းအဝယ်စာချုပ်ချုပ်မယ်။ရောင်းသူထံက ပါဝါယူထားတဲ့ “ ဘဏ်ကိုယ်စာလှယ် ” က ရောင်းသူအဖြစ်လိုက်ပါပြီးလက်မှတ်ထိုးပေးမယ်။
“ စာချုပ်ရုံးကမှတ်ပုံတင်အရောင်းအဝယ်စာချုပ်ထုတ်ယူလို့ရရင် မြို့တော်ခန်းမမှာ ကျွန်မတို့နာမည်သွားပြီး အမည်ပြောင်းလိုက်ရင် ကျွန်မတို့နာမည်ပေါက်ရပြီပေါ့။ မဟုတ်ဘူးလားဆရာ ”
“ ဟုတ်ပါပြီ ဟုတ်ပါပြီ မချယ်ရီရယ် “ ok ” ဒါဆိုရင် မနက်ဖြန် (၃) နာရီမှာရောင်းမယ် ၊ ဝယ်သူနဲ့ ရှေ့နေရောသုံးပွင့်ဆိုင် ဆုံကြမယ်လေ ” ကောင်းပါပြီခင်ဗျာ …
“ ချယ်ရီသင်းက ညပိုင်းမှာ Viber ကတဆင့် ရောင်းသူ/ဝယ်သူ ရဲ့ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူတွေနဲ့ မြေငှါးဂရန်မိတ္တူတွေကို ပို့ပေးပါတယ်။ ကျွန်လည်း စရန်ပေးစာချုပ်ကို ညပိုင်မှားအပြီးပြင်ဆင်ထားရတယ် ။မနက်ရောက်တာနဲ့ကွန်ပျူတာဆိုင်မှာ အချောထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ချိန်ထားတဲ့အချိန်မှာ ချယ်ရီတို့က ကားနဲ့လာခေါ်ပါတယ်။ ရောင်းမယ့်အိမ်ကိုအရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ရောင်းသူနဲ့ပွဲစား (၃) ဦးကလည်း ရောင်းမယ့်အိမ်က အဆင်သင့်စောင့်နေပါတယ်။
“ ရောက်တာနဲ့ နှစ်ဘက်စလုံးကအရောင်းအဝယ်စရန်ပေးစာချုပ်ကိုဖတ်ကြည့်ကြပါတယ်။စရန်ပေးစာချုပ်မှာက အကယ်၍ အချိန်မီ ဘဏ်ကငွေချေးမရရင်ဝယ်သူပေးထားတဲ့ သိန်း ၂၀၀ ပြန်ပေးဖို့နဲ့ ဝယ်သူက ဘဏ်ငွေထုတ်ချေးလို့ရရဲ့သားနဲ့ မဝယ်ဘဲ ပျက်ကွက်ခဲ့ရင်စရန်ငွေအဆုံးခံရမယ်။ ထိုအတူဘဲ ရောင်းသူဘက်က အပြီးအပိုင်ရောင်းမယ့်အချိန်မှာ စိတ်ပြောင်းသွားပြီး ရောင်းဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့ရင် စရန်ငွေ (၂) ဆ လျော်ရမယ်ဆိုတဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေပါနေတော့ နှစ်ဘက်သဘောတူဖို့လိုတယ်လေ။ ”
ရောင်းသူကိုလေ့လာကြည့်ရတာ တစ်ဖက်မှာပေးရမယ့် ငွေအခက်အခဲရှိနေပုံပေါ်တယ်။ ဒီစရန်ငွေ သိန်း (၂၀၀) မရရင်သူ့အတွက် ဆုံးရှုံမှုတစ်ခုခုကြီးမားနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်မြေနဲ့အိမ်ကို သိန်း (၂၀၀) ရရုံနဲ့ ဘဏ်မှာပေါင်နှံတာကိုလက်ခံတာမျိုးတွေ့ရတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာတော့ ကိုယ့်အပူနဲ့ကိုယ်ရှိတတ်ကြတာ ဓမ္မတာပါဘဲလေ။ဒါနဲ့ စရန်ပေးစာချုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ ဝယ်သူဘက်က မြေငှါးဂရန်လက်ဝယ်ပေးပါလို့တောင်းတယ်။ သိန်း ၁၀၀၀ ကျော်တန်ကို သိန်း ၂၀၀ စရန်ပေးရုံနဲ့ရောင်းသူဘက်ကဂရန်မပေးနိုင်တာကတော့အမှန်ပါ။
နောက်ဆုံးအပြန်ပြန်အလှန်လှန်ညှိနှိုင်းကြရင်းဝယ်သူလည်း ဂရန်မကိုင်နဲ့ရောင်းသူလည်းကိုင်မထားနဲ့ ချေးငွေထုတ်ပေးမယ့် ဘဏ်မှာဘဲ စောစောစီးစီး အပ်နှံထားကြဖို့နှစ်ဘက်သဘောတူမှအဆင်ပြေသွားတော့တယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဘဏ်မှာ ချေးငွေလျှောက်ထားတာက တစ်လကြာရင်ရမှာဆိုတော့ အခုလို ဂရန်အပ်နှံထားတာက နှစ်ဘက်စလုံးစိတ်အေးရတာပေါ့။ အဲဒီလိုသဘာတူညီချက်ရမှမောင်ကောင်းဖေလည်း စိတ်အေးသွားတော့တယ်။
အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမယ့် မြေငှါးဂရန်နဲ့စာချုပ်အဆက်အစပ်တွေက ရောင်းသူရဲ့ အသိမိတ်ဆွေထံမျာ အပ်နှံထားတယ်ဆိုလို့ အဲဒီမိတ်ဆွေရှိရာ ဗဟန်းမြို့နယ် ကိုသွားပြီး မြေငှါးဂရန်နဲ့ အခွန်ပြေစာတွေသွားကြည့်ခဲ့ရသေးတယ်။ အဲဒီအိမ်မှာဘဲ သိန်း ၂၀၀ ပေးချေခဲ့ပြီးနောက်နေ့မှာဘဏ်မှာ အပ်နှံထားဖို့ မြေဂရန်နဲ့ မှတ်ပုံတင်စာချုပ်မူရင်းတွေယူဆောင်ပြီပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။
“ အဖြစ်ကတော့ မနှစ်ကနဲ့မတူ ” တော့ဘူးလို့တောင်ပြောရမလိုဖြစ်နေပြီ အရောင်းအဝယ် စရန်ပေးစာချုပ်ချုပ်တယ် သိန်း ၂၀၀ စရန်ပေးတယ်ရောက်းသူက စရန်ပေးစာချုပ်ချုပ်တယ် သိန်း ၂၀၀ စရန်ပေးတယ်ရောင်းသူက အရောင်းမြေပုံကူးပေးရတယ်။ပြီးတော့ ရောင်းသူက မိမိအမည်ပေါက်မြေဂရန်ကို ဘဏ်မှာလိုက်ပြီးပေါင်နံပေးရတယ်။ ရလာတဲ့ချေးငွေတွေကို ရောင်းသူကိုပေးတယ်။ရောင်းသူက ဘဏ်ကိုအထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲပေးခဲ့တယ်။ ပြီးတော့မှ မှတ်ပုံတင်အရောင်းအဝယ်စာချုပ်မှာရောင်းသူအဖြစ် ဘဏ် ကိုယ်စားလှယ်လိုက်လာကာ စာချုပ်မှာ လက်မှတ်ရေးထိုးပေးတယ်။ဒီလိုနည်းနဲ့ ဝယ်သူက မြေနဲ့အိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်သွားတယ်ဆိုတော့ တော်တော်ကောင်းတဲ့ဝယ်နည်းတစ်မျိုးပေါ့နော် နှစ်ဘက်စလုံးအဆင်ပြေလို့ဝမ်းသားတာက မောင်ကောင်းဖေပါ ။
ညပိုငျးထမငျးစားပွီးလို့အနားယူခြိနျမှာ ဖုနျးချေါသံကွားလို့ ဖှငျ့ကွညျ့လိုကျတဲ့အခါ နံပါတျအသဈနဲ့မို့ “ ဟယျလို…… မင်ျဂလာပါ ” လို့ နှုတျခှနျးဆကျလိုကျပါတယျ။ ဒီလိုနှုတျဆကျလိုကျတာနဲ့ ဟုတျကဲ့ …
“မင်ျဂလာပါဆရာ ဦးကောငျးဖေ ဟုတျပါသလားရှငျ ”
“ ဟုတျပါတယျသမီး ”
“ ကြှနျမက ‘ ခယျြရီသငျးပါ ’ Property အိမျခွံမွကေုမ်ပဏီက ‘ ကိုအောငျ ’ ရဲ့ အသိမိတျဆှပေါ။ အျော … ဟုတျလား ဘာအကူအညီပေးရမလဲပွောပါဦး ”
“ ကြှနျမတို့က မွောကျဒဂုံ ၄၀ ရပျကှကျမှာ မွနေဲ့အိမျဝယျခငျြလို့ပါ။ အဲဒါစရနျပေးစာခြုပျပေးဖို့ ရှနေ့ကွေီးကိုချေါခငျြလို့ပါ မနကျဖွနျညနေ (၃) နာရီမှာစာခြုပျမှာပါ ”
“ ရပါတယျ …လာပေးနိုငျပါတယျ ”
“ ဒါပမေဲ့ စာခြုပျက ရိုးရိုးစာခြုပျနဲ့မတူပါဘူး၊ ဘဏျက Home Lone ခြေးငှနေဲ့ဝယျယူမှာဖွဈလို့လုံလောကျတဲ့ခြေးငှအေရငျလြှောကျယူရပါ့မယျ။ဘဏျကခြေးငှရေရှိပွီးမှ ကနျြငှခြေေးမှာပါ ”
“ ဟငျ…. ဟုတျလား ” မောငျကောငျးဖစေဉျးစားကွညျ့တာကတော့ နညျးနညျးတော့ထူးဆနျနသေလိုပါဘဲ ” ဒါကွောငျ့ “ ခယျြရီတို့က စရနျငှအေရငျခမြယျ ကနျ့ကှကျရနျရှိမရှိသတငျးစာကွျောငွာပွီးစောငျ့မယျ ။ကနျ့ကှကျသူမရှိရငျ နောကျဆုံးကနျြငှခေပြွေီး မွနေဲ့အိမျလကျရောကျယူမှာမဟုတျလား ”
“ အဲဒီလိုမဟုတျဘူးရှငျ့ ကြှနျမတို့က စရနျငှေ သိနျး (၂၀၀) ပေးမယျ။ ရောငျးသူက မွို့တျောစညျပငျမှာ အရောငျးမွပေုံကူးပေးရမယျ။ အရောငျးမွပေုံရတာနဲ့ ရောငျးသူပိုငျဆိုငျတဲ့ မွနေဲ့အိမျကို ပုဂ်ဂလိကဘဏျတဈခုမှာ ပေါငျနှံမယျဒါကိုရောငျးသူကလညျး သဘောတူရမယျ ”
“ ပေါငျနှံတဲ့အခါ ရောငျးသူအမညျပေါကျ မွဂေရနျကိုဘဏျမှာ အပျနှံထားရမယျ၊ ရောငျးသူနဲ့ဝယျသူတို့ခြုပျဆိုမှာ နှဈဦးသဘောတူမွနေဲ့အိမျအရောငျးအဝယျစာခြုပျကိုလညျး ဘဏျမှာအပျနှံထားရမယျပေါ့ ၊ ဒါ့အပွငျ မွဂေရနျအမညျပေါကျရောငျးသူက ဘဏျကို အထူးကိုယျစာလှယျလှဲစာလှဲပေးရမယျ ။ ဘဏျက ကြှနျမတို့ပေးခြေးရမယျ့ ငှအေားလုံးကို ထုတျပေးတာနဲ့ရောငျးသူကိုပေးဖို့ ကနျြတဲ့ငှအေားလုံးကိုပေးခလြေိုကျမယျလေ” ဘဏျကထုတျပေးလိုကျတဲ့ ငှအေရငျးတှနေဲ့ လစဉျအတိုးငှတှေကေိုတော့ ကြှနျမတို့ကလစဉျရတဲ့ ဝငျငှထေဲက အရဈကပြေးဆပျသှားမှာဖွဈပါတယျ။ ဘဏျကခြေးယူထားတဲ့အကွှေးငှအေားလုံးကတြောနဲ့ မွနေဲ့အိမျဖိုးကို အခှနျဦးစီးဌာနမှာ အခှနျဆောငျမယျ ၊ အခှနျဆောငျပွီးရငျ မှတျပုံတငျအရောငျးအဝယျစာခြုပျခြုပျမယျ။ရောငျးသူထံက ပါဝါယူထားတဲ့ “ ဘဏျကိုယျစာလှယျ ” က ရောငျးသူအဖွဈလိုကျပါပွီးလကျမှတျထိုးပေးမယျ။
“ စာခြုပျရုံးကမှတျပုံတငျအရောငျးအဝယျစာခြုပျထုတျယူလို့ရရငျ မွို့တျောခနျးမမှာ ကြှနျမတို့နာမညျသှားပွီး အမညျပွောငျးလိုကျရငျ ကြှနျမတို့နာမညျပေါကျရပွီပေါ့။ မဟုတျဘူးလားဆရာ ”
“ ဟုတျပါပွီ ဟုတျပါပွီ မခယျြရီရယျ “ ok ” ဒါဆိုရငျ မနကျဖွနျ (၃) နာရီမှာရောငျးမယျ ၊ ဝယျသူနဲ့ ရှနေ့ရေောသုံးပှငျ့ဆိုငျ ဆုံကွမယျလေ ” ကောငျးပါပွီခငျဗြာ …
“ ခယျြရီသငျးက ညပိုငျးမှာ Viber ကတဆငျ့ ရောငျးသူ/ဝယျသူ ရဲ့ မှတျပုံတငျမိတ်တူတှနေဲ့ မွငှေါးဂရနျမိတ်တူတှကေို ပို့ပေးပါတယျ။ ကြှနျလညျး စရနျပေးစာခြုပျကို ညပိုငျမှားအပွီးပွငျဆငျထားရတယျ ။မနကျရောကျတာနဲ့ကှနျပြူတာဆိုငျမှာ အခြောထုတျလိုကျပါတယျ။ ခြိနျထားတဲ့အခြိနျမှာ ခယျြရီတို့က ကားနဲ့လာချေါပါတယျ။ ရောငျးမယျ့အိမျကိုအရောကျသှားခဲ့ပါတယျ။ ရောငျးသူနဲ့ပှဲစား (၃) ဦးကလညျး ရောငျးမယျ့အိမျက အဆငျသငျ့စောငျ့နပေါတယျ။
“ ရောကျတာနဲ့ နှဈဘကျစလုံးကအရောငျးအဝယျစရနျပေးစာခြုပျကိုဖတျကွညျ့ကွပါတယျ။စရနျပေးစာခြုပျမှာက အကယျ၍ အခြိနျမီ ဘဏျကငှခြေေးမရရငျဝယျသူပေးထားတဲ့ သိနျး ၂၀၀ ပွနျပေးဖို့နဲ့ ဝယျသူက ဘဏျငှထေုတျခြေးလို့ရရဲ့သားနဲ့ မဝယျဘဲ ပကျြကှကျခဲ့ရငျစရနျငှအေဆုံးခံရမယျ။ ထိုအတူဘဲ ရောငျးသူဘကျက အပွီးအပိုငျရောငျးမယျ့အခြိနျမှာ စိတျပွောငျးသှားပွီး ရောငျးဖို့ငွငျးဆနျခဲ့ရငျ စရနျငှေ (၂) ဆ လြျောရမယျဆိုတဲ့ စညျးကမျးခကျြတှပေါနတေော့ နှဈဘကျသဘောတူဖို့လိုတယျလေ။ ”
ရောငျးသူကိုလလေ့ာကွညျ့ရတာ တဈဖကျမှာပေးရမယျ့ ငှအေခကျအခဲရှိနပေုံပျေါတယျ။ ဒီစရနျငှေ သိနျး (၂၀၀) မရရငျ သူ့အတှကျ ဆုံးရှုံမှုတဈခုခုကွီးမားနိုငျတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျမွနေဲ့အိမျကို သိနျး (၂၀၀) ရရုံနဲ့ ဘဏျမှာပေါငျနှံတာကိုလကျခံတာမြိုးတှရေ့တယျ။ လူတိုငျးလူတိုငျးမှာတော့ ကိုယျ့အပူနဲ့ကိုယျရှိတတျကွတာ ဓမ်မတာပါဘဲလေ။ဒါနဲ့ စရနျပေးစာခြုပျပွီးတဲ့အခါမှာ ဝယျသူဘကျက မွငှေါးဂရနျလကျဝယျပေးပါလို့တောငျးတယျ။ သိနျး ၁၀၀၀ ကြျောတနျကို သိနျး ၂၀၀ စရနျပေးရုံနဲ့ရောငျးသူဘကျကဂရနျမပေးနိုငျတာကတော့အမှနျပါ။
နောကျဆုံးအပွနျပွနျအလှနျလှနျညှိနှိုငျးကွရငျးဝယျသူလညျး ဂရနျမကိုငျနဲ့ရောငျးသူလညျးကိုငျမထားနဲ့ ခြေးငှထေုတျပေးမယျ့ ဘဏျမှာဘဲ စောစောစီးစီး အပျနှံထားကွဖို့နှဈဘကျသဘောတူမှအဆငျပွသှေားတော့တယျ။ ဘာကွောငျ့လညျးဆိုတော့ ဘဏျမှာ ခြေးငှလြှေောကျထားတာက တဈလကွာရငျရမှာဆိုတော့ အခုလို ဂရနျအပျနှံထားတာက နှဈဘကျစလုံးစိတျအေးရတာပေါ့။ အဲဒီလိုသဘာတူညီခကျြရမှမောငျကောငျးဖလေညျး စိတျအေးသှားတော့တယျ။
အားလုံးအဆငျပွတေယျဆိုပမေယျ့ မွငှေါးဂရနျနဲ့စာခြုပျအဆကျအစပျတှကေ ရောငျးသူရဲ့ အသိမိတျဆှထေံမြာ အပျနှံထားတယျဆိုလို့ အဲဒီမိတျဆှရှေိရာ ဗဟနျးမွို့နယျ ကိုသှားပွီး မွငှေါးဂရနျနဲ့ အခှနျပွစောတှသှေားကွညျ့ခဲ့ရသေးတယျ။ အဲဒီအိမျမှာဘဲ သိနျး ၂၀၀ ပေးခခြေဲ့ပွီးနောကျနမှေ့ာဘဏျမှာ အပျနှံထားဖို့ မွဂေရနျနဲ့ မှတျပုံတငျစာခြုပျမူရငျးတှယေူဆောငျပွီပွနျခဲ့ကွပါတယျ။
“ အဖွဈကတော့ မနှဈကနဲ့မတူ ” တော့ဘူးလို့တောငျပွောရမလိုဖွဈနပွေီ အရောငျးအဝယျ စရနျပေးစာခြုပျခြုပျတယျ သိနျး ၂၀၀ စရနျပေးတယျရောကျးသူက စရနျပေးစာခြုပျခြုပျတယျ သိနျး ၂၀၀ စရနျပေးတယျရောငျးသူက အရောငျးမွပေုံကူးပေးရတယျ။ပွီးတော့ ရောငျးသူက မိမိအမညျပေါကျမွဂေရနျကို ဘဏျမှာလိုကျပွီးပေါငျနံပေးရတယျ။ ရလာတဲ့ခြေးငှတှေကေို ရောငျးသူကိုပေးတယျ။ရောငျးသူက ဘဏျကိုအထူးကိုယျစားလှယျလှဲပေးခဲ့တယျ။ ပွီးတော့မှ မှတျပုံတငျအရောငျးအဝယျစာခြုပျမှာရောငျးသူအဖွဈ ဘဏျ ကိုယျစားလှယျလိုကျလာကာ စာခြုပျမှာ လကျမှတျရေးထိုးပေးတယျ။ဒီလိုနညျးနဲ့ ဝယျသူက မွနေဲ့အိမျကိုပိုငျဆိုငျသှားတယျဆိုတော့ တျောတျောကောငျးတဲ့ဝယျနညျးတဈမြိုးပေါ့နျော နှဈဘကျစလုံးအဆငျပွလေို့ဝမျးသားတာက မောငျကောငျးဖပေါ ။
အိမ်ခြံမြေ ဗဟုသုတ သိမှတ်ဖွယ်ရာ
မအူပင် | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
သမိုင်းဗဟိုလမ်းမှာ သိန်း ၆၀၀ တန်...
BCC ကျပြီး တိုက်ခန်းရောင်းမည်။
မြောက်ဒဂုံ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း / အငှါး